Izibane ze-UV ze-UV zokucoca amanzi → iAcuva • Iiyitshi • Iikampu • Indlu
Izibane ze-UV ze-UV - funda ngokusebenza kunye nokusebenziseka lula UTSHINTSHO Itekhnoloji yokucoca amanzi!
Ungacoca njani amanzi?
Into yokuqala eza engqondweni yomntu wonke kukuyiyeka idlule kwezinye filtr.
Umdaka uya kuhlala kwisihluzi kwaye siya kucoca amanzi.
Nangona kunjalo, kufuneka wenze ntoni kwimeko apho amanzi abonakala ecocekile, kwaye ukwakheka kwawo kubandakanya okunokuba yingozi, nokuba kuyingozi kwimpilo yethu iintsholongwane, iintsholongwane nezinye iintsholongwane?
Ukudlula nje kwisihluzi akusayi kwenza nto. Kule meko, amanzi kufuneka acocwekwaye ayisiyihluzi nje.
Sukucoca amanzi -icoce!
Ukucoca, unyango okanye ukubulala iintsholongwane yinkqubo ebonakala ngathi inzima enokwenziwa, umzekelo, ngokusetyenziswa kweekhemikhali.
Uninzi lwazo luchaphazela imeko-bume yendalo, ngakumbi izinto eziphila emanzini. Asifuni nokuzifaka ityhefu ngamachiza kwaye sisebenzise amanzi angenakuthelekiswa nanto ngevumba elifana nangaphakathi kwikhemesti.
Ke ukusebenzisa ntoni?
Uyakwazi ozone. Unyango lwe-Ozone lucoca ngokufanelekileyo kwaye aluthathi hlangothi kunongo lwamanzi. Nangona kunjalo, kunzima ukucinga i-ozonation yamanzi ekhaya.
Ke, ngokukhawuleza kangakanani, ngexabiso eliphantsi, ngempumelelo, ngendlela enobungqongileyo kwaye engenancasa yokucoca amanzi ekhaya ... enkampini, kwizikhephe, eofisini nasevenkileni?
Izibane ze-Acuva UV ze-UV
Sikubonisa inkampani ehambele phambili kwezobuchwephesha Acuva. Sisisasazi esikhethekileyo nesithe ngqo seemveliso zeAcuva kwintengiso yasePoland.
Iiacuva ziikiti zokucoca amanzi zisebenzisa Izibane ze-UV ze-UV. Ezi ziimveliso zenzululwazi yakutshanje eziyilelwe eCanada.
Ukucocwa kwamanzi ukusebenzisa iinkqubo zeAcuva kunjalo Izihlandlo ezili-100 zisebenza ngakumbi kunokusebenzisa iindlela ezikhuphisanayo.
Ngapha koko, ukusetyenziswa kwe Izibane ze-UV ze-UV Yenza iimveliso zeAcuva zibe sisisombululo esifanelekileyo kungekuphela kwekhaya kunye neofisi, kodwa kukwalungele nokucoca amanzi kwi-yacht okanye kwindawo yemoto.
Ukucocwa kwamanzi kusetyenziswa i-Acuva UV-LED kusekwe kulwazi lwamva nje lobuchwephesha kunye nendalo. Akukho khemikhali, zinjengechlorine, ezingeniswa emanzini.
kususa 99,9999% yeebhaktiriya iintsholongwane kunye nezifo
Amanzi kuphela afumana ukubulala iintsholongwane, ngenxa yoko I-99,9999% yeebhaktiriya, iintsholongwane kunye nazo zonke ezinye iintsholongwane ziyasuswaezinokubangela iingxaki zempilo kwaye ziya kuthi zingene ngokulula nakweyiphi na isihluzo samanzi esintu.
Sisebenzisa izixhobo zokucoca amanzi ze-Acuva UV, sinokuwasebenzisa amanzi kwimilambo yeentaba kunye namachibi ngaphandle koloyiko lokuba siya kugula ngenxa yokusetyenziswa kweebhaktiriya, iintsholongwane okanye iintsholongwane ezihlala emanzini. Izibane ze-UV ze-UV iya kubulala iintsholongwane, incl I-SARS-COV-2kunye neentsholongwane ezinokubangela iingxaki zesisu.
Ukucocwa kwamanzi kusetyenziswa izibane ze-UV-LED akuchaphazeli ukungcamla kwayo. Intsholongwane, iintsholongwane kunye nezifo ziyafa, kodwa ukwakheka kwamanzi akuguquki. Akukho kwaziswa kungeniswa, ke amanzi anencasa ngokufanayo naphambi kokuba acocwe. Ivumba layo nombala azitshintshi. Isicoci se-Acuva UV-LED asenzi nto ngaphandle kokukhanyisa.
Ukucoca amanzi kubandakanya ukuwanyanga ngobude obufutshane, phakathi kwama-250 nama-280 nm. Ukuvezwa okunjalo kubangela ukuba iDNA yeentsholongwane ezihlala emanzini iphule. Ngenxa yoko, amanzi ayahlanjululwa. 99,9999% yazo zonke iintsholongwane, iintsholongwane kunye nezinye izifo ziyafa.
Itekhnoloji yokubulala iintsholongwane isebenzisa izibane ze-UV kungoku nje ziqhuba kakhulu kwaye zihlala zisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo zoqoqosho.
Nangona kunjalo, awudingi nokwazi oku, kuba ukusetyenziswa kweenkqubo ze-Acuva UV ze-LED kulula kakhulu. Awunyanzelekanga ukuba uphathe nantoni na enzima. Awudingi ukukhumbula nantoni na. Izixhobo zokucoca amanzi ze-Acuva UV zisetyenziswa ngendlela efanayo nakwimpompo eqhelekileyo.
Ngaphaya koko, iinkqubo zokucoca amanzi ze-Acuva UV-LED zinobungakanani obulinganayo. Bathatha indawo encinci kakhulu, ke zilungele iikharavani, iikhampasi kunye neenqanawa, izikhephe kunye nezikhephe.
Zingasetyenziswa ngokulula kwizindlu zasehlotyeni, iivenkile, iiofisi, iivenkile zokutyela, kunye nezindlu ezizodwa nezineentsapho ezininzi.
Ngokungafaniyo neefilitha zamanzi, izibane ze-UV-LED ziphantse zagcinwa.
Awudingi ukucoca okanye ukubuyisela nantoni na. Akukho nto iyavala. Akukho mfuneko yokulawula inqanaba lokungcola kwisihluzi. Apha, isibane se-UV-LED sikhanya emanzini.
Ukusetyenziswa kwezibane ze-fluorescent ze-LED kukwangumsebenzi omkhulu wokudibanisa umsebenzisi. Inesiphumo esihle ekusebenzeni okungenasondlo kwenkqubo yonke yonyango lwamanzi.
I-Acuva Arrow 5 UV-LED itephu yamanzi
Ubomi benkonzo yeminyaka eyi-10 +
Inewaranti ende kunye nexesha lokuphila. Iibhalbhu eziqhelekileyo kufuneka zitshintshwe rhoqo. Izibane ze-fluorescent ze-LED zinewaranti yonyaka eyi-10 +, musa ukufudumeza, sebenza kwangoko emva kokuvula kwaye ungatshi.
Ngokuchasene nezibane ezenziwe kubuchwephesha bendabuko, imveliso ye-Acuva UV-LED ikwayimeko yendalo, kuba akukho mercury kwizibane ze-fluorescent ze-LED.
I-Acuva Arrow 5 UV-LED
I-UV-LED ikwanokusetyenziswa kombane osezantsi kakhulu kunenkqubo ye-UV esekwe kwiibhalbhu zemveli zemekyuri. Iinkqubo ze-Acuva UV-LED zilungiselelwe ukuba zinikwe amandla ziibhetri. Banokudityaniswa kunikezelo lwamandla ali-12V kunye ne-AC DC.
I-Acuva ibonelela ngeemveliso eziguqulweyo phantse kulo naluphi na uhlobo lokusetyenziswa. Ukusuka kuluhlu olubanzi lwezixhobo zokucoca amanzi ze-UV-LED, unokukhetha izixhobo, umzekelo, ngomthamo weelitha ezi-5 ngomzuzu kunye nobomi benkonzo yeelitha ezingama-900.
I-Acuva Eco NX-Isilivere ye-UV-LED ngempompo
Yeka ukukhathazeka ngamanzi asebhotileni kwi yacht yakho okanye ikharavani. Sebenzisa amanzi angaphandle komgca kwaye ucoce ngaphambi kokusela usebenzisa inkqubo yeAcuva UV-LED yokubulala iintsholongwane. Yonwabela amanzi acocekileyo angenampompo kwisikhephe sakho nakwi-RV yakho okanye kwikhaya leholide ngaphandle kwamanzi amakhulu.
I-Acuva Eco NX-Isilivere ye-UV-LED
Ukukhetha iinkqubo zokucoca amanzi Acuva I-UV-LED ukhetha iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ezibonelela ngamanzi acocekileyo, angenazintsholongwane ekhayeni lakho, kwisikhephe okanye kwimoto.
Izibane ze-UV ze-UV vs. Izibane ze-UV
Inkqubo yonyango lwamanzi yesiqhelo isebenzisa izibane ze-UV zemekyuri. Nangona kunjalo, kukho inkxalabo enkulu malunga nefuthe lokusingqongileyo kunye nokusikelwa umda kokusebenza kwezibane ze-UV.
5 / 5 ( 4 iivoti )
acuvaacuva ecoacuva eco uv ikhokeleI-acuva ikhokelele kwinkqubo yokuhlanjululwa kwamanzi kwe-UVinkqubo yokucoca i-acuvaubuchwepheshe beacuvaUngathenga okanye uthengise izabelo Acuva Technologies, Inc.I-Acuva UV ye-UVacuva uv isicoci samanziacuva amanziisihluzi samanzi se-acuvainkqubo yokucoca amanzi nge-acuvaacuva yokucoca amanziiinkqubo zonyango lwe-acuvaAllegro UV izibaneIsibane se-UV seGermicidalUV isibane seentsholongwaneIzibane zeGermicidal UV zamanzizokuhlanjululwa kwamanziNokuba izibane ezikhokelwe yi-UV ziyingoziIzibane ze-UV ziyingoziUV amanzi kweentsholongwaneunyango lwe-disinfectionukubulala iintsholongwane emanziniiindlela zokubulala iintsholongwane emanziniukubulala iintsholongwane amanzi okuselaUV amanzi kweentsholongwaneiintsholongwane kwiitanki zamanzi okuselaUkucocwa kwamanzi asekhayaI-UV ekhokele isibane sokucoca amanziizibane zentsholongwanekwakhokelela kunye UV izibaneIzibane ezikhokelwa yimitha ye-UVIzibane ze-UV ezikhokelwayoUkuvavanywa kwezibane ze-UVIzibane ze-UVUV okanye izibane ezikhokelwayoIzibane ze-UV zamanziUV kunye nezibane ezikhokelwayoUV kwakhokelela izibaneUkuphononongwa kwezibane ze-UVkukhokelwa emanziniIzibane ze-UV eziphambiliUkukhanya okukhokelekileyo kwe-UVukucoca amanziunyango lwamanzi emvulaukucoca amanzi okuselaunyango lwamanzi kwimizi-mvelisoukusinda kokuhlanjululwa kwamanziUkucocwa kwamanzi ekhayaukucoca amanzi equleniukucoca amanzi etephuukucocwa kwamanzi emithonjeniukucoca amanziIsithinteli se-UVisicoci samanzi esicocekileyoUV ekhokele isicoci samanziUV kukhokelela kunyango lwamanziIinkqubo zonyango lwe-UVUkucocwa kwamanzi okukhokelwa ngu-UVinkampani yokucoca amanziyintoni i-nsf eqinisekisiweyoamanzi kwisikhepheamanzi kwikhaya lemotoI-bulb ekhokelwayo yesibane se-UVIibhola ezikhokelwayo zesibane se-UV